वालवालिकालाई साइबर अपराध तथा इन्टरनेटको दुरुपयोगबाट कसरी बचाउने ? – Makalukhabar.com
२०७७ श्रावण २०, मंगलवार २२:२३
वालवालिकालाई साइबर अपराध तथा इन्टरनेटको दुरुपयोगबाट कसरी बचाउने ?
कन्टेन्ट फिल्टर गर्ने कि सचेतना जगाउने ? यस्तो छ सरोकारवालाको सुझाव
काठमाडौं । बालबालिका र युवाहरुको क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था चाइल्डसेफ नेटले इन्टरनेटबाट बालबालिका र युवाहरुलाई हुने उत्पीडनको बारेमा विभिन्न ६ वटा भर्चुअल वर्कसप आयोजना गरेको छ ‘इभिडेन्स रिभ्यु, रिसर्च र एडभोकेसी अन चाइल्ड अनलाइन प्रोटेक्सन’ को विषयमा चाइल्ड सेफनेटले युनिसेफसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको भर्चुअल वर्कशपमा २५ जनाभन्दा बढि रिसोर्स पर्सनको रुपमा सहभागी भएका थिए । ५ सयभन्दा बढिले कार्यक्रममा प्रत्यक्षरुपमा सहभागिता जनाएको आयोजकले जानकारी दिएको छ ।
विभिन्न ६ वटा भर्चुअल वर्कसपमा बालबालिका, अभिभावक, युवा, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, सरोकारवाला तथा सरकारसँग छलफल गरिएको थियो । विभिन्न निकाय र व्यत्तिहरुसँगको छलफलबाट नेपालमा बालबालिका र युवाहरु इन्टरनेटको प्रयोग कसरी गरिरहेका छन ?, यसको दुरुपयोग कसरी हुन्छ ? र यसको निवारणको लागि अभिभावकदेखि सरकारसम्मले कस्तो तयारी र योजनाहरु बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।
कार्यक्रमको उदेश्य अनलाइनमा बालबालिका तथा युवाहरुको सुरक्षामा सचेतना बढाउँदै सरोकारवालाहरुको राय संकलन गर्नु रहेको चाइल्ड सेफनेटका सञ्चालक अनिल रघवंशीले बताए । २०७७ साउन ३ गते देखि सञ्चालन भएकोे वर्कशप साउन १४ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो । यी श्रङ्खलाहरुबाट संकलन गरिएको विचारहरुबाट आगामी दिनहरुमा बालबालिकाको सुरक्षा र यसको वकालतको लागी प्रयोग गरिने कुरा आयोजकले जनाएको छ ।
२०११ सम्म इन्टरनेट प्रयोगकर्ता ९.०५ थियो, सन् २०१९ मा मात्रै २० लाख ५० हजार व्यत्तिहरुले इन्टरनेटकोे प्रयोग गरेका छन् । अहिले इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता ७० प्रतिशत पुगेकाको छ ।
कार्यक्रमको पाचौं सेसनमा दुरसञ्चार प्राधिकरण र आइएसपीहरुसँगको छलफलमा वत्ताहरुले इन्टरनेटमा कन्टेन्ट फिल्टरिङ गर्नुसँगै वालवालिकामा सचेतना जगाउने, विद्यालयका शिक्षामा नै यस सम्वन्धी जानकारी गराउने र अभिभावकको अनुगमनमा इन्टरनेटका प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो । यसैगरी एनटिए र विभिन्न आइएसपीहरुले नेपालमा पोर्न साइट र भैम फैलाउने समाचार र अन्य वेबसाइटहरु पनि बन्द गरेका छन । केहि आइएसपीहरुले बालवालिका लक्षित इन्टरनेट सेक्युरिटी गाइड तथा एप्लिकेकशनहरु पनि सञ्चालनमा ल्याएका छन ।
हरेक ४ जना बालबालिका वा युवाहरुमा १ जनाले १० घण्टा भन्दा बढी इन्टरनेटको प्रयोग गरेको देखियो । लकडाउन अघि १–३ घण्टासम्म प्रयोग गर्ने गरेकोमा अहिले प्रायः नेपालीले ४–६ घण्टासम्म प्रयोग गर्न थालेको अध्ययनले देखाएको छ । ८३ प्रतिशतले लकडाउन पछि ४ घण्टा भन्दा बढि प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । इटरनेटको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर अपराध बढ्दै गएको छ ।
उनीहरुले सरकारी तवरवाट भइरहेको केहि प्रयासहरु अब पर्याप्त नहुने भन्दै अब पोलिसीमै यस्ता कुराहरु समावेश गरेर छुट्टै टास्कफोर्स बनाएर काम गर्नसके प्रभावकारी हुने बताए । वालवालिकासँगै अभिभावकमा सचेतना र डिजिटल लिट्रेसी बढाउनुपर्ने, सरकारले अनावश्यक वेबसाइटहरु फिल्टर गर्नुपर्ने र सेवा प्रदायकहरुले सेक्युरिटीका टुल्सहरु उपलब्ध गराएमा दुरुपयोग कम हुने वत्ताहरुको बिचार थियो । घटना भइसके पनि कप्लेन गर्नसकिने सहज सुविधा र त्यसको फलोअप र कारवाहीको प्रकृया पनि प्रभावकारी भएमा बालवालिकालाई इन्टरनेटको उत्पिडन तथा अपराधबाट जोगाउन सकिने सरोकारवाला तथा विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन ।
मकालु खबर 713 खबरहरु0टिप्पणीहरू
जसले बनाए मदनबहादुर–हरिबहादुरको मूर्ति (भिडियोसहित)
एसबिआई बैंकका ग्राहकलाई चिरायु हस्पिटलमा १५ प्रतिशत छुट